PIX iyo CODEX Magacyada inay ku midoobaan X2X Media Group | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Qeybaha PIX iyo CODEX inay ku midoobaan X2X Media Group
Qeybaha PIX iyo CODEX inay ku midoobaan X2X Media Group
PIX iyo CODEX waxay shaaciyeen in labada shirkadood la keenayo hal astaan ​​astaan ​​midaysan leh iyadoo la aasaasayo X2X Media Group. Isku-darka shirkadani waxay sii xoojin doontaa u-fidinta kooxda ee warshadaha madadaalada, iyada oo naaqusaysa sumcadda labada shirkadood ee ku saabsan hal abuurka hal abuurnimada iyo awooda injineeriyada hal dallad hal mar iyada oo la ilaalinayo aqoonsigooda adag iyo dariiqyadooda madaxa-bannaan ee suuqa.
"Tan iyo markii PIX ay qaadatay CODEX bishii Abriil waxaan si adag u shaqeyneynay," ayuu yiri Marc Dando, Sarkaalka Sare ee Naqshadeynta, X2X. Isku soo wada duuboo, isku dhafnaan ahaan hal nooc ayaa ah mid ka tarjumeysa heerka wanaagsan ee isku xirnaanta ay gaareen kooxaha waxaana tani ay sii xoojin doontaa aaladda aan u soo qaadanayno hal abuurka hal abuurka leh, filim sameeyayaasha, iyo istuudiyaha adduunka. ”
Natiijadii ka soo baxday Kooxda X2X Media:
Waa shirkad tikniyoolajiyadeed teknoolojiyadeed oo shuraako la ah macaamiisha si ay ugu suurtagasho qulqulka hal abuurka guud ee wareegga nolosha wax soo saarka.
Waxay soo bandhigtaa qayb ka mid ah isgaarsiinta aaminka ah iyo xalka maareynta waxyaabaha ku jira.
Waxay xaddidaysaa awooda laba abaalmarin ee alaabada wax soo saarka iyo kooxaha R&D.
Waxay ka shaqeyn doontaa sameynta xalal cusub oo cusub oo iskuxiraya farqiga u dhexeeya wax soo saarka hal-abuurka ah iyo boostada.
"Muuqaalka wax soo saarka ayaa si dhakhso ah isu beddelaya, iyo isbeddelka qalabkeenna ayaa ka hadlaya baahiyaha dhabta ah ee adduunka," ayuu yiri Eric Dachs, Madaxa Fulinta, X2X. iyo wada noolaanshaha deegaanka oo xoojiya hal-abuurnimada iyo waxtarka qiimaha. ”
Xarunta 'X2X' waxay sii joogi doontaa San Francisco, halka ay shirkaddu ku ballaarinayso hawlgalkeeda injineerinka ee Wellington, Odessa, Budapest, London, iyo Royal Leamington Spa, oo ay weheliso iibyo dheeraad ah iyo xafiisyo taageero oo ku yaal New York iyo Los Angeles.
Ku saabsan X2X
Alaabteenna ku guuleysiga abaalmarinta ee warbaahinta iyo warshadaha madadaalada waxaa ka mid ah xallinta wax soo saarka iyo sidoo kale duubis heer sare ah iyo aaladaha shaqada ee lagu taageerayo iibiyaasha hormuudka u ah iibka muuqaalka, telefishanka, iyo wax soo saarka ganacsiga. Waxaan ku bixinaa adeeg shaqsi ku gaar ah xawaaraha wax soo saar ee deg degga ah. Waxaan hubinaa sii wadida hal abuurka iyo hoos u dhaca halista mashruuc anagoo hubinayna in fikradaha si sax ah loo wadaago, la keydiyo, loona keydiyo geedi socodka hal abuurka.
Codex technology madadaalada Marc Dando PIX Spears & Fiilooyinka TV Technology TVU Networks X2X	2019-11-08
Previous: QYOU Media waxay sameysay iskaashi qaybinta kooxda Channelka ee Qowmiyadeed ee Kanada
Next: NewTek TriCaster® Mini wuxuu keenay UHD Digital Production Media and Streaming Iskuullada, Ganacsiyada, iyo Xirfadlayaasha AV